Sakaria 9 AKCB - Matteus 9 LB
Atemmu A Etia Israel Atamfo
Awurade asɛm tia Hadrak asase
na ɛbɛka Damasko
efisɛ, nnipa ne Israel mmusuakuw nyinaa
ani wɔ Awurade so.
2Na ɛbɛka Hamat a ɔne no bɔ hye,
ɛbɛka Tiro ne Sidon, ɛwɔ mu sɛ wɔyɛ anyansafo.
3Tiro asi abandennen ama ne ho;
waboa dwetɛ ano te sɛ mfutuma,
ne sikakɔkɔɔ ano te sɛ dɔte a ɛwɔ mmɔnten so.
4Nanso Awurade begye nʼahode nyinaa
na wasɛe ne tumi a ɔwɔ wɔ po so,
na wɔde ogya bɛhyew no dwerɛbee.
5Askelon behu na wasuro
Gasa de ɔyaw bebubu ne mu,
na Ekron nso saa ara, efisɛ nʼanidaso bɛsa.
Gasa bɛhwere ne hene
na wobegyaw Askelon ofituw.9.5 Askelon…Gasa…Ekron: Filistifo nkuropɔn abiɛsa. Nʼanidaso bɛsa: Esiane sɛ Ekron da Filistiman atifi pɛɛ nti, ɛno na ebedi kan ahu amane. Nʼanidaso sɛ Tiro begyina mu ama no ɔhaw anaa abɛbrɛsɛ bi mu no renkosi hwee so.
6Ananafo bɛtena Asdod,
na metwa Filistifo ahantan agu.
7Meyi mogya9.7 Mogya—Egyina hɔ ma abosom afɔrebɔ. Akyiwade nnuan—Nnapɔnna nnuan a ho ntew. Yebusifo—Nnipa bi a wɔtenaa Yerusalem tete bere mu a wɔbɛfraa Yudafo mu. (2 Sam 24.16-24). afi wɔn ano,
akyiwade nnuan nso meyi afi wɔn ano.
Nkae no bɛyɛ yɛn Nyankopɔn de;
wɔbɛyɛ Yuda ntuanofo,
na Ekron bɛyɛ sɛ Yebusifo.
8Nanso mɛbɔ me Fi ho ban
wɔ wɔn a wɔtetɛw bɔ korɔn ho.
Ɔhyɛsoni biara ntumi mfa me nkurɔfo so bio,
efisɛ afei merewɛn.
Sion Hene Ba
9Di ahurusi, Ɔbabea Sion!
Teɛ mu, Ɔbabea Yerusalem!
Hwɛ, wo hene reba wo nkyɛn.
Ɔteɛ na ɔwɔ nkwagye,
odwo, na ɔte afurum so,
afurum ba so na ɔte.
10Megye nteaseɛnam afi Efraim
ne akofo apɔnkɔ afi Yerusalem,
na akodi tadua no wobebubu mu.
Ɔbɛpae mu aka asomdwoe nsɛm akyerɛ aman no.
Nʼahenni befi po akɔka po;
ebefi Asubɔnten no akɔpem nsase ano.
11Na wo de, esiane me ne wo mogya apam no nti,
meyi wo nneduafo afi amoa a nsu nni mu mu.
12Monsan nkɔ mʼaban mu, nneduafo a mowɔ anidaso;
mprempren mpo merebɔ mo nkae sɛ mɛhyɛ mo anan mu mmɔho.
13Mɛkom Yuda sɛnea mikuntun me tadua
na mede Efraim bɛhyɛ mu.
Mɛkanyan wo mmabarima, Sion,
atia wo Hela mmabarima,
na mɛyɛ wo sɛ ɔkofo afoa.
14Afei Awurade bɛda ne ho adi wɔ wɔn so;
nʼagyan betwa yerɛw te sɛ anyinam.
Otumfo Awurade bɛhyɛn torobɛnto no;
ɔbɛbɔ nsra wɔ atɔe fam ahum mu,
15Asafo Awurade bɛkata wɔn so.
Wɔde ahwimmo bɛsɛe
na wɔde adi nkonim.
Wɔbɛnom na wɔabobɔ mu sɛnea wɔanom nsa;
wɔbɛyɛ ma te sɛ kuruwa a
wɔde pete afɔremuka ntwea so.
16Awurade wɔn Nyankopɔn, begye wɔn saa da no
sɛ oguanhwɛfo gye ne nguan.
Wobetwa yerɛw yerɛw wɔ nʼasase so,
sɛ abohemaa a ɛbobɔ ahenkyɛw ho.
17Sɛnea wɔn ho betwa na wɔn ho ayɛ fɛ afa!
Aduan bɛma mmerante anyin ahoɔden so
na nsa foforo bɛma mmabaa anyin saa ara.
AKCB : Sakaria 9